Midowga musharaxiinta oo isku khilaafay kulamo ka dhacay Muqdisho (Xog) | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Midowga musharaxiinta oo isku khilaafay kulamo ka dhacay Muqdisho (Xog)
Midowga musharaxiinta oo isku khilaafay kulamo ka dhacay Muqdisho (Xog)
Xog ay heshay Badweyn Online ayaa sheegeysa in midowga musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ay dood soo kala dhax-gashay, taas oo ka dhalatay kulamo habeen hore ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana kulamadaas lala qaatay madaxda maamullada Galmudug iyo HirShabeelle.
Axmed Cabdi Kaariye iyo Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe, oo ah madaxweynayaasha Galmudug iyo HirShabeelle, ayaa habeen hore la kulmay Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif iyo Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, iyagoo kala hadlay qalalaasihii ka dhacay Muqdisho.
Si kastaba, sida ay ogaatay Badweyn Online, Shariif Xasan Sheekh Aadan, Cabdikariin Xuseen Guuleed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan mucaaradka ayaa Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo Kheyre ku qabsaday in ay ka qeyb galaan kulamadaas, iyadoo aan laga tala gelin xubnaha kale ee Golaha Midowga.
Xubnahan ayaa ku dooday in kulamadaas ay ahaayeen qalad inay dhacaay, ayada oo Qoor Qoor iyo Guudlaawe ay ka aamuseen dhibaatadii ciidamada dowladda ay u gaysteen shacabkii ay ku mataleen siyaasadda dalka, ayaga oo xabadeeyey xilli ay dibad-baxayeen.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan qarsan dareenkiisa, wuxuuna qoraal uu shalay soo dhigay facebook ku yiri “Ma habbooneyn in lala kulmo Guudlaawe iyo Qoorqoor iyagoo aan caddeyn mowqif ay ka taagan yihiin weerarradii waxashinimo ee Farmaajo ku qaaday shacabka iyo siyaasiyiinta ay deegaannadooda metelaan. Mana aha in ay u ekaysiiyaan in xaalku caadi yahay, lana cammiro shirka Farmaajo. Waa xadgudub kale in Muqdisho oo aan dibadbax nabadeed ka dhici karin la yiraahdo ninkii shacabkeedii iyo ragii la tartami lahaa weeraray ayaa doorasho lagala xaajoonayaa.”
Qoor Qoor iyo Guudlaawe ayaa ah madaxweynayaal uu kursiga ku fariisiyey Farmaajo, mana la filayo inay marnaba hadal ka dhan ah u sheegaan si shaacsan.
Previous articleMD Saaciid Deni: “Waxaan ka baqeynay in Villa Somalia raashinka sun noogu darto”
Next articleDeni: “Dal kala maqan kama dhici karto Doorasho Qof & Cod ah”.
Goobaha banaanbaxayaasha Sabtida isugu imaan doonaan oo la shaaciyay & Mucaaradka oo..
Musharrax 3aad oo ku dhawaaqay in uu u tartamayo gudoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland.
Milkiilaha Astaan cable TV oo laga sii daayey xabsi ku yaalla Magaalada Hargeysa
Sawirro Kulan Xasaasi Ah Oo Galabta Ka Dhacay Xarunta Villa Hargeysa Ee Muqdisho
Faah-faahinta qaraxii Garoowe iyo Puntland oo ka hadashay xaaladda xubnaha lala beegsaday
Gudoomiye Yariisow oo ku fashilmay Amar Xasaasi ah uusoo saaray 30-maalin ka hor..
XOG: Fahad Yaasiin oo keenay qorshe cusub oo lagu sugayo amniga Muqdisho,xilli Xiisad jirto
Daawo sawirada:RW Rooble oo baaq muhiim ah u diray bulshada Soomaaliyeed
Beesha caalamka oo qaadeysa tallaabo muhiim ah kadib heshiiskii mucaaradka iyo DF
XOG:Dowladda Federaalka oo ciidamo u daabushay degmooyin ka tirsan Gobolka Gedo
Shirkii madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo caawa la isku mari la’yahay&War Murtiyeedka Lasoo Saari Lahaa
Somaliland oo War Lama Filaan ah kasoo saartay xiisad dagaal oo ka taagan Gobolka Sool